Ukuthuthukiswa kohlelo - Ama-Cofttek holdings anqunyelwe
I-Cofttek ingahlinzeka ngezinsizakalo ezilandelayo, zonke zazo ezixhaswa yizinqubomgomo zethu eziqinile ekuvikelweni kwe-Intellectual Property (IP), ukuqinisekisa ukuthi amaphrojekthi aphathwa ngokuqinile kunethemba ngaso sonke isikhathi.
Inqubo yezinga-up kusuka
amagremu kuya kumathani weMethric
Ukusekelwa okuphelele kokuhlaziya
kuhlanganise ne-HPLC, i-GC-MS ne-NMR
Ngemikhiqizo lapho inqubo yokukhiqiza isivele ikhona khona, i-Cofttek inganikeza inkontileka kanye nezinsizakalo zokukhiqiza ekunikezeni imininingwane yekhasimende. Ngaphandle kwezinsizakalo ezibalulwe ngenhla, siphinde sinikeze isevisi yokwaziswa okubalulekile yokwaziswa okubalulekile (ngaphandle kwezindleko ezengeziwe) ukuqinisekisa ukuthi, noma ngabe kunokwenzeka, sisebenzisa kuphela imithombo yezinto eziphezulu zekhwalithi emanani emakethe okuncintisana.
I-Cofttek nayo ikwazi ukunikeza isevisi yangokwezifiso yocwaningo kanye nentuthuko ehambisana nezidingo ezithile zomthengi. Sinerekhodi elihle kakhulu lokuxazululwa kwezinselelo eziyinkimbinkimbi zezinkinga zamakhasimende ethu namaphrojekthi ethu angase asekelwe ngokulingana kwesikhathi esigcwele (FTE) noma amanani nsuku zonke. Thintana nathi ukuthola ukuthi ithimba lethu le-R & D elinamandla kakhulu lingenza kanjani iphrojekthi yakho elandelayo impumelelo yethu yakamuva.